Al-Shabaab oo weerartay saldhig ay ciidamada Itoobiya ku leeyihiin gobolada dhexe ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeAl-Shabaab oo weerartay saldhig ay ciidamada Itoobiya ku leeyihiin gobolada dhexe ee Soomaaliya
June 9, 2016 Abdi Omar Bile Home, Somalia, South-Central 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada al-Shabaab ayaa weerartay saldhig ay leeyihiin ciidamada Itoobiya kadb markii gaari miinaysan ay ku qarxiyeen gudaha saldhiga maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegtay kooxda.
Deegaanka weerarka dhacay ayaa lagu magacaabaa Halgan wuxuuna ku yaalaa gobolada dhexe ee Soomaaliya wuxuu 300 km kaga beeganyahay dhanka waqooyiga ee caasimada Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay ka maqleen saldhiga qarax aad u weyn iyo rasaas la is-waydaarsanayo kahor waaberigii saakay. Waxay soo wariyeen in wali la maqlayo rasaasta qoryaha.
“Dagaalyahanadayadu waxay weerar ku qaadeen saldhiga Halgan ee AMISOM,” afhayeenka al-Shabaab u qaabilsan howlgalada Cabducasiis Abu Muscab ayaa sidaa uu sheegay wakaalada wararka Reuters. Wuxuu intaas ku daray in kooxda ay gaari miinaysan adeegsatay kadibna ay xabado halkaas isku-dhaafsadeen maleeshiyada iyo ciidamada Itoobiya.
“Wuxuu ahaa qarax aad u weyn. Wuxuuna burburiyay albaabka hore iyo qaybo kale oo saldhiga kamid ah,” ayuu yiri Abu Muscab.
Amisom wali si dhaqso ah ugama aysan jawaabin.
Kooxda ayaa badanaa weeraro rasaas iyo bumbooyin ah la beegsata saraakiisha dowlada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM si ay awooda uga tuurto dowlada uu reer Galbeedka taageero ee Soomaaliya.
Bartamihii bishii Janaayo, ciidamada Kiinya oo ka hoos shaqeeya AMISOM ayaa weerar khasaaro culus kasoo gaaray kadib markii al-Shabaab ay weerar ku qaadeen waaberigii hore saldhigooda oo ku yaalay deegaanka Ceel Cade, oo u dhow xadka Kiinya, al-Shabaab waxay sheegtay in ay weerarkaas ku dishay in ka badan 100 askari laakiin Kiinya ma aysan bixin tirada khasaaraha dhabta ah.
June 13, 2016 Itoobiya oo ciidamo cusub geysay deegaanka Halgan ee bartamaha Soomaaliya
June 10, 2016 Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in 240 maleeshiyo al-Shabaaab ah lagu dilay saldhiga Halgan
June 12, 2016 Afhayeenka AMISOM oo sheegay in ciidamada ay ka bixi doonaan garoonka kubada cagta Muqdisho
June 15, 2016 Maleeshiyo looga shaki qabo al-Shabaab oo xalay madaafiic ku garaacay qaybo kamid ah Muqdisho
Al-Shabab militants attack base of Ethiopia troops in central Somalia
Al-Shabab says its fighters kill 40 Ethiopian soldiers in Central Somalia
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidanka Difaaca Puntland ee PSF ayaa afar miinada wadada lagu aaso ah ku burburshay gudaha Buuraha Galgala, PSF ayaa bayaan ay soo dhigtay Facebook-ka ku sheegtay maanta oo Axa ah. PSF ayaa bayaanka [...]
Madaxweynaha Mexico: Yeeli mayno wax derbi ah
Mexico City-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaha dalka Mexico Enrique Pena Nieto ayaa cambaareeyay tilaabada Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhaqaaqayo ee darbi dhiska, waxaana uu ku adkeystay in dalkiisu uusan qorshaynayn fulinta hawshaas. “Waxaan ka xumahay [...]
Kadib todobo sanno oo dagaal dhiig badan ku daatay Al-Shabaab weli waxay khatar ku tahay Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabab ayaa bilowday bartamihii sanadkii 2010-ka, dagaalka ayaa qarxay kadib markii maleeshiyada uu hoggaaminayay hoggaamiyihii hore Maxamed Siciid Atom ay qabsadeen tuulada Galgala. Kadib qiyaastii [...]